Aqalka Sare oo daadka raacsiiyay lix wareegto oo Farmaajo saxiixay | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiyaha Aqalka Sarre, Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa ka digay, dhaqan galka lix wareegto oo uu saxiixay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Aqalka Sare ee Baarlamaanka Fadaralka Soomaaliya, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sharciyo iyo dhisidda hay’ado sharci darro ah oo Farmaajo saxiixay iyaga oo aan soo marin Aqalka Sare, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
“Goluhu wuxuu si dhow ula socdaa isla markaana diiwaan galiyay dhamaan isku dayo wareegtooyin ah oo lagu dhaqan galinayo shurruc, laguna sameynayo hay’ado Dastuurka KMG ah, kuwaas oo aan soo marin Aqalka Sare”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Cabdi Xaashi.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, ayuu ku eedeeyay inuu saxiiyay shuruucdaas iyo dhismaha Hay’adaha sharci darrada ah, ee aan la soo marsiin Aqalka Sare, wuxuuna tilmaamay in Farmaajo ku tuntay dastuurka dalka u yaalla.
Sharciyada uu diiday Aqalka Sare ee Farmaajo Saxiixay lana mariyay Aqalka Hoose ee Baarlamaanka, ayaa soo wada baxay intii u dhaxaysay, 25/12/2020 ilaa 31/12/2020, waxayna kala yihiin, sida hoos ku cad.
Sharciga iyo Hay’adda
Taariikhda Farmaajo saxiixay
Wax ka baddal sharci darro ah oo lagu sameeyay Sharciga maareynta maaliyadda guud. ( Public Finance Management PFM).
Ansixinta Xubnaha Guddiga Madaxa bannaann ee la dagaalanka musuqmaasuqa.
Ansixinta Xubnaha Golaha Adeega Garsoorka.
Ansixinta sharciga wax ka badalidda qodobka 10aad ee sharciga lagu dhisay Guddiga Madaxa bannaan ee Xudduudaha iyo Fadaraalka.
Ansixinya sharciga Hay’ada Diiwaan galinta iyo Aqoonsiga Dad-weynaha Soomaaliyeed.
Ansixinta sharciga wax ka badalidda qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooynka Qaranka.
Tan iyo markii xilka laga tuuray Guddoomiyihii Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan ‘Jawaari’ Laanta Fulinta (Xukuumadda) ayaa si taban ugu milantay Aqalka hoose ee Baarlamaanka JFS, taas oo meesha ka saartay doorkiisii la xisaabtanka.
Farmaajo iyo Kooxdiisa waxa ay albaabada ka xirteen Aqalka Sare, waxayna si sharci darro ah u maamulayeen Guddoonka Golaha Shacabka in muddo ah, taas oo sababtay in la meel mariiyo heshiisyada uu maanta wax kama jiraanka ka soo qaaday Aqalka Sare.